Maro ny mpanara-maso ny raharaham-pirenena no mahatsikaritra fa sanatriavin’ny vava toa manao vazaha mody miady ihany Rajoelina sy Rajaonarimampianina. Tsy mahagaga satria kitapo nifonosana ara-politika iray ihany tokoa no niaviana, dia ny “fitondrana tetezamita”.
Samy manandratra ny teny hoe “fisandratana” na “fanandratana” izy ireo. Ny iray manazava ny “Iem” fa ny iray kosa, ny Vina fanandratana amin’ny 2030.
Samy mametraka ho zava-dehibe ny famokarana herin’aratra ho fototry ny fampandrosoana. Dia samy mitanisa ny tetik’asa takian’izany. Samy manome lanja ny angovo azo havaozina. Ny ho fiantefan’izany rehetra izany any amin’ny vahoaka no asa fa hatreto aloha dia mbola samy any an-kibon’ny omby. Mbola samy manome vahana ireo vahiny mpamokatra herin’aratra ka mivarotra izany amin’ny Jirama na ny ankehitriny na ny tamin’ny tetezamita. Samy tompon’andraikitra tao tokoa moa na Rajoelina na Rajaonarimampianina.
Dia ara-bakinteny ilay fitenenana hoe “mpirahalahy mizara dian’omby e, tsy vaky fa mitriatra!”
Nokianin’ny mpiara-dia amin-dRajaonarimampianina koa ny famelabelarana nentin-dRajoelina tany an-dafy momba ny “Iem”, fa tamin’ny zoma teo, taiza i Henry Rabary-Njaka, minisitry ny raharaham-bahiny Malagasy no nanambara ny vanin’andro hanaovana ny fifidianana filohampirenena eto Madagasikara? Moa tsy tany amin’ny haino aman-jery frantsay tany an-dafy tany? Dia inona no mahasamihafa an’izany angaha, hoy ianao? Angaha moa ny frantsay no hifidy filohampirenena sa ny Malagasy no any Frantsa no amoahanao ny datim-pifidianana? Toy ny fanakianana ny filohan’ny tetezamita teo aloha ihany e! Angaha i Frantsa no hampandrosoana sy hasandratra fa tsy i Madagasikara sy ny vahoaka Malagasy no tany Frantsa no nivelabelarina izy iny?
Maro ny zavatra ahitana soritra fa “tsy mifanohitra fa mitovy hevitra amin’ny resaka fitantanan-draharaham-pirenena Rajoelina sy Rajaonari-
mampianina”. Azo ampidirina ho toa izany koa aza Ravalomanana.
Raha ny politika ankapoben’izy ireo dia samy miankin-doha sy mikatsaka ny fahazoana famatsiam-bola avy any ivelany avokoa fa ny vahoaka fotsiny no rebireben-dry zalahy amin’ny resaka hafa eto.